Andrianavalonimerina, zanak Andriamasinavalona tamin-dRasolomanambonitany, dia mpifehy ny ampahany amin Imerina fahavelon io mpanjaka io, ka Ambohitrabiby sy Amboatany any Avarabohitra no nofeheziny.
Ny anaran - tsamirery dia anarana anondroana na ilazana singan-javatra manokana ka tsy manana heviny hafa io anarana io afa-tsy ny fanondroany ilay zavatra. Mety ho anaranolona na anaram-biby na anaran-tanàna na anaran-toerana sns izany. Atao ami ...
Ny gazetiboky Ny Tilikambo Fiambenana dia gazetiboky niforona taminnytaona 1879, izay isanireo gazetiboky mivoaka isam-bolana zarainny Vavolombeloni Jehovah. Io gazetiboky io no fitaovana lehibe indrindra aminny fampianaranio fikambanana io. Ny f ...
Ny endrika araka anjara asa na kaso dia endriky ny teny, indrindra ny anarana sy ny mpisolo ary ny mpamari-toetra, izay manambara ny anjara asa sy/na ny tsinjara asanio teny io ao aminny fehezanteny. Tsy ny fiteny rehetra no manana anio fomba fan ...
Ny mpisolo manontany dia teny ao aminny sokajinny mpisolo izay enti-manontany. Tsy tononina ny tena anaranilay zavatra anontaniana satria tsy ilaina ny hanaovana izany, na satria tsy fantatra na tsy tadidy io anarana io, na tsy manana anarana ila ...
I Amazia na Amaziasa dia mpanjakani Jodà nandimby ani Joasy rainy ary zanakity mpanjaka ity tamini Joadana. Nanapaka ani Jodà nandritra ny 29 taona izy taminny fiantombohanny taonjato faha-8 tal. J.K.
I Ariaramnesy dia mpanjaka iraniana, isanny Akemenida, izay rahalahini Kirosy I sy zanaki Teispesy. Mety razambeni Dariosy I koa izy araka ny sora-tsokitri Behistona sasy nanapaka taminny tanini Parsomasa nandritra ny fanapahanny rahalahiny Kiros ...
Ny mpisolo manondro dia teny ao aminny sokajinny mpisolo izay enti-mampitodika na mampifantoka ny mpihaino any aminny zavatra lazaina na efa voalaza na mbola holazaina, nefa tsy tononina ny tena anarany satria tsy ilaina ny hanaovana izany, na sa ...
I Ptolemaiosy IV na Ptolemaiosy IV Filopatora dia mpanjaka sy faraon i Egipta teo anelanelanny taona 222 tal. J.K. sy ny taona 204 tal. J.K., avy aminny fianakaviana lagida. Nandimby ani Ptolemaiosy III Evergetesy rainy izy sady nodimbiasini Ptol ...
Ny Tsobato dia kilalao nentim-paharazana malagasy. Vatokely dimy no ilaina ary misy dingana maromaro arahina ka ampifamenoina ny isa azo ka arakaraka ny isa tratrarina nifanarahana no atao isa farany. Izay mahafeno io isa nifanarahana io voalohan ...
Ny Boky fahadiminny Makabeo dia boky ara-pivavahana jiosy izay tsy isanireo boky ao aminny Tanakh na aminny Baiboly kristiana. Apokrifa io boky io fa tsy deoterokanonika na ho anny Katolika na ho anny Ortodoksa. Ny Protestanta dia manasokajy azy ...
Ny abogida na abugida, dia karazana fombam-panoratana ampiasaina mba hanoratra ny feonny fiteny iray. Izy io dia eo anelanelanny abidy manoratra ny vaninteny sy ny abidy manasaraka tsara ny zanapeo sy ny renifeo ho litera manokana ; ny litera ao ...
Raha faritana ara-tsiansa ny Trozona dia biby mampinono mivelona andranomasina. Ary manana angeza sy vesatra avo raha ampitahaina aminireo biby mampinono hafa.Io biby io dia voasokajy ao aminny lahatra Cetacea.
Ny Evanjelini Barnabà na Evanjelini Barnabe na Filazantsarani Barnabasy dia asa soratra mitantara ny fiainani Jesosy nosoratanolon-tokana na maro tsy fantatra anarana, izay mety ho Miozolmana, ka mety avy taminny loharanon-tsoratra tranainy kokoa ...
I Arsesy na Artakserksesy IV dia mpajaka persiana tao aminny fianakavia-mpajaka akemenida, izay nanjaka taminny taona 338 sy 336 tal. J.K. I Artakserksesy III no teo alohany ary i Dariosy III no nandimby azy. Atao hoe Ἀρταξέρξης, / Artaksérksês i ...
Ny fiteny gongbe dia fiteninny foko ao Benîna sy Nijeria atao hoe Gona. Ao aminny vondrom-pianakaviam-piteny nijero-kongoley ny fiteny gongbe. Mifanakaiky aminny fiteny fongbe io fiteny io. Izy no fiteny be mpampiasa faharoa ao Benîna. Ao aminny ...
Ny teboka dia mari-panoratana ampiasaina aminny fomba maro hampitana hevitra isan-karazany ka ny tena fantatra dia ny maha mari-piatoana azy. Ampiasaina ny teboka rehefa manoratra mba hamaranana ny fehezanteny iray na izay andian-teny tiana hotap ...
Ny Evanjelinny Fahamarinana na Filazantsaranny Fahamarinana na Vaovao Mahafalinny Fahamarinana dia soratra gnostika taminny taonjato faha-2 aminny teny kopta izay hita niaraka taminny tranombokini Nag Hammadi. Ny lohateniny dia nalaina taminireo ...
Ny anarana hoe Kirosy dia anaranny mpanjaka akemenidani Persia izay niantsoana mpankaja roa sy mpitari-tafika iray. Aminny teny grika dia atao hoe Κῦρος Kuros, izany fa aminny fiteny persàna tranainy kosa dia کوروش / Kurash. Ireto avy ireo olona ...
Ny paleo-ortodoksia dia firehana ara-teolojia protestanta tao Etazonia izay nipoitra taminny faramparanny taonjato faha-20 sy taminny fiantombohanny taonjato faha-21 sady miompana aminny fanekam-pinoana nifanarahana vokatrireo konsily ekiomenika ...
Bambi dia horonantsary aminny sarimihetsika amerikana notontosaini nataoni Walt Disney, ary nivoaka taminny 13 aogositra 1942. Ireo olona nampindrana ny feony ho anio sarimiaina io dia i Donnie Dunagan, Hardie Albright, John Sutherland, Paula Win ...
Ny atidoha dia taova iray izay ivonny rafitry ny rafi-pitatitra ao anaty biby rehetra ary be indrindra aminny biby tsy mifoka. Izy io dia eo an-doha, matetika mifanakaiky aminireo taova fantsom-pihetseham-po toy ny fahitana. Izy no taova be pitsi ...
I Brahma dia andriamanitra mpahary ao aminny hindoisma, izy no andriamanitra voalohany ao aminny trinite hindo. Ny andriamanitra telo hafa ao aminio trinite io dia i Vishnu sy i Shiva. Atao hoe ब्रह्मा / Brahmā izy aminny teny sanskrita. Tsindran ...
Ny Fikambananny Mpianatra Baiboly na Mpianatra Baiboly na Mpianatry ny Baiboly, izay atao aminny teny anglisy hoe Bible Student movement, dia fihetsiketsehana na fikambanana kristiana naorini Charles Taze Russell. Nisedra fisraham-bazana maro nan ...
Ny sinema dia karazan-kanto iray. Izy io dia zava-kanto voaorina aminny sary maro alaina avy aminny atao hoe fakan-tsary na kamerà manokana hahafahana maka sary efatra ambinny roapolo na telopolo anatinny iray segondra. Ireo sary ireo dia alefa m ...
Ny tongotra dia rafitra anatomika hita aminny vertebrata maro. Io no ampahany aminny tongotra aman-tongotra iray izay mavesatra sy mamela olona. Aminny biby maro misy tongotra, ny tongotra dia taova misaraka aminny tapany aminny tongony izay misy ...
Ny lohalika dia mikambana aminny feny aminny tongotra ary misy tonon-taolana roa: ny iray eo anelanelanny biby, ary ny iray eo anelanelanny olona. Io no firaisana lehibe indrindra ao aminny vatanolombelona.
I Alfeo na Alfe dia olona resahina an-kolaka ao aminny Filazantsara ao aminny Baiboly satria ny anarany dia ampiasaina hanavahana ireo Jakoba roa lahy, dia i Jakoba zanaki Alfeo sy i Jakoba zanaki Zebedeo. Mety raini Jakoba atao hoe zanaki Alfeo ...
Ny fiteny holandey dia vondrom-pitenim-paritra neerlandey tenenina indrindra ao aminny faritanini Holanda Atsimo, ao Holanda Avaratra ary any Utrecht. Ireo tenim-paritra ireo dia avy aminny fiteny fransika izay nifangaro aminny singa avy aminny f ...
Ny vavony dia taova hozatra, poakaty ao aminny lalan-kibonny olombelona sy biby maro hafa, ao anatinizany ny misy hazon-damosina maromaro. Ny vavony dia manana firafitra mihalehibe ary miasa ho toy ny taova fandevonan-kanina tena ilaina. Ao aminn ...
Fahotana taminny fototra
Ny fahotana taminny fototra, araka ny teolojia kristiana, dia ny fahadisoana voalohany nataonny olombelona ka niteraka ny fahalavoany, dia ny fahotani Adama sy Eva niseho tao aminny saha Edena, izay nanimba ny toetranny taranakolombelona rehetra ...
Ny fiteny babilôniana dia anarana intsoana ny endriky ny fiteny akadiana notenenina tao Babilônia nanomboka tamin ny fiantombohan ny taonarivo faha-2 tal. J.K. Nampiasain ireo mpanoratra sy tamin ny sehatry ny fifandraisana iraisam-pirenena tao A ...
Ny fiteny kopta dia fiteny hamito-semitika avy aminny fiteny egiptiana tranainy izay avy aminny fiteny demotika sy grika tranainy. Izy no fiteny ampiasaina aminny fotoam-pivavahana ao aminny fiangonana kristiana ao Egipta atao hoe Kopta ihany koa ...
Ny fitaterana dia fitondrana zavatra, na olona avy amina toerana iray mankany amina toerana samihafa aminilay toerana voalohany, matetika aminny alalanny fiara mandeha ambonny lalana na ambonny lakandrano.
I Akemenesy no mpanorina ny fianakavia-mpanjaka Akemenida. Hita ao aminny sora-tsokitri Behistona, izay nataoni Dariosy I na Dariosa I sora-tononina, ny anarany izay lazaini Dariosy fa razambenny mpanjakani Asàna rehetra sy anny mpanjakani Persia ...
I Teispesy dia mpanjakani Persia nanomboka taminny taona 675 tal. J.K. hatraminny taona 640 tal. J.K., izay nandimby ani Akemenesy rainy. Teo anelanelanny taona 674 sy 670 izy dia niondrika teo anatrehan i Faraortesy mpanjakanny Mediana. Atao hoe ...
I Afrahata, izay atao hoe Afrahata ilay Persana Hendry, dia mpanoratra kristiana aminny fiteny siriaka niaina taminny antsasany voalohanny taonjato faha-4, izy sy i Efrema avy any Nisîba no azo lazaina fa mpanoratra kristiana siriaka tranainy ind ...
I Ptolemaiosy XV na Ptolemaiosy XV Filopatora Filometora Kaisara, izay atao hoe Kaisariona na Ptolemaiosy Kaisara, dia zanaki Kleopatra VII izay niara-nanjaka tamin-dreniny taminny taona 44 tal. J.K. Novonoini Oktavio i Kaisariona sy i Antilosy n ...
I Arsamesy dia mpanjaka isanireo Akemenida taminny taona 520 tal. J.K., zanaki Ariaramnesy, nandao ny maha mpanjaka azy izy mba hampisy fitokisana eo aminy sy i Kirosy Lehibe. Niala taminny raharaham-pitondrana izy ka nonina tao Farsa nandritra n ...
Ny fiteny hebreo vaovao dia karazanny fiteny hebreo izay ampiasaina na am-bava na an-tsoratra nanomboka taminny fiafaranny taonjato faha-19. Miavaka izy noho izy lasa fiteny velona, noteneninireo Sionista aloha, avy eo nampiasainny ankamaroanny I ...
Ny renisoratra dia litera ao aminny abidy izay noforonina mba hanoratana ny renifeo. Ny zanatsoratra, izay litera noforonina hanoratana ny zanapeo, no mifanohitra sy mifameno aminy. Tsy ny abidy rehetra akory no ahitana fanavahana ny renisoratra ...
I Jotama dia mpanjakani Jodà taminny taonjato faha-8 tal. J.K., zanaki Ozia tamini Jerosa zanakavavini Zadoka sady raini Ahaza. Nanomboka nanjaka izy taminny faha-25 taonany ka nanjaka nandritra ny 16 taona teo anelanelanny taona 742 sy 735 tal. ...
I Aristobolo II dia mpanjakani Jodea tao aminny fianakaviana hasmoneana, zanaka lahini Aleksandro Janeo sy Salome Aleksandra. Nanongana ny rahalahiny Joany Hirkano II izy ary lasa mpanjakani Jodea taminny taona 70 tal. J.K. ka i Hirkano II nataon ...
I Salome Aleksandra dia mpajakavavini Jodea teo anelanelanny taona 76 sy 67 tal. J.K., izay vadini Aristobolo I avy eo lasa vadini Aleksandro Janeo rehefa maty i Aristobolo I rahalahiny. Nanohana ny Fariseo i Salome ary ireo lohanny Fariseo no na ...
I Esao dia olona tantaraina ao aminny Baiboly. Zanaki Isaka sy i Rebeka izy sady kambana tamini Jakoba. Tian-drainy kokoa izy nefa nivarotra ny fizokiany sady tsy azony koa ny tsodranon-drainy tokony ho azy noho ny hafetseni Jakoba. Nikasa ny ham ...
Ny Bôetosiana dia ireo mpikambana ao amin ny fikambanana jiosy tamin ny faramparan ny vanimpotoan ny Tempoly Faharoa. Amin ny lovatsofina rabinika dia manam-pifandraisana akaiky amin ny Sadoseo ny Bôetosiana na fivoaran ny Sadoseo. Mety ho momba ...
Testamentanny Patriarka roa ambinny folo
Ny Testamentanny Patriarka roa ambinny folo dia boky apokrifanny Baiboly, izay ananana aminny dikan-teny grika sy mitantara ny lahateny sy hafatrafatra nataonireo patriarka roa ambinny folo zanaki Jakoba aloha kelinny hahafatesanizy ireo. Misy fi ...
Antonio Climati dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpamoaka horonantsary mizaka ny zom-pireneni Italia teraka ny 14 %s 1931 tao Roma ary maty ny 14 11 1931
Edwin Harrison McHenry dia injeniera sivily, injeniera mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 25 Janoary 1859 tao Cincinnati ary maty ny 21 Aogositra 1931
Wolfgang Kohlhaase dia mpanoratra senariô, talen-koronantsary, mpanao asa soratra mizaka ny zom-pireneni Alemaina teraka ny 13 Martsa 1931 tao Berlin
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386